Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulan gaar ah la yeeshay James Swan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Kulanka dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay Arrimaha doorashada dalka ka dhacaya gaar ahaan muhiimada ay leedahay in Is-faham laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doorashada.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxaa ay lagu sheegay in kulanka Guudlaawe iyo James Swan looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan Arrimaha Fatahaada, maadaama laguda-galayo xili roobaadka.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan uu balan qaaday in QM ay Hirshabeelle ka taageeri doonto dhinacyo kala duwan oo ku aadan Arrimaha horumarinta Maamulka.
“Kulankaan ayaa aad looga hadlay Arrimaha Doorashooyinka gaar ahaan muhiimada ay leedahay in isfaham buuxa laga gaaro qabsoomida Doorashoooyinka lagu wada qanacsanyahay.Sidoo kale Kulankan waxaa looga hadlay Xaaladaha Guud ee Hirshabeelle gaar ahaan fatahaadaha maadaama laguda galayo xili roobaadka ayaa lagu yiri Qoraalka.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa maalmihii lasoo dhaafay Caasimadda dalka ka waday kulamo kala duwan oo uu la qaadanayay Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada oo ku sugan Magaalada Muqdisho.